Izicelo Factory, Suppliers | China Izicelo Manufacturers
ngomphathi ku 18-05-29
Pharmaceutical In kwezemveliso zamachiza, poweders abaninzi kakhulu hygroscopic.When efumileyo, ezi kunzima nokwenza kwaye abanalwazi kwithala-ubomi. Ngenxa yezi zizathu, ukuvelisa, ukupakisha kunye nokugcina inkqubo kweemveliso zoxubo, kulawulwe kwinqanaba ukufuma i ...
A umthombo enkulu VOCs ngumntu-zenziweyo Ipeyinti, ingakumbi ipeyinti kunye Ipeyinti zokuzikhusela. Pende kufuneka batwabulule umboniso okubakhusela okanye zokuhombisa. Ngenxa kwiipropati zalo yokuhlawula amatyala elungileyo, NMP isetyenziswa ukunyibilikisa uluhlu olubanzi neeplastikhi. Iyasetyenziswa eninzi Lithium ion fabricat ...
Ukutya A level ezilawulwa kakuhle umoya ukufuma ibaluleke kakhulu umgangatho kwimveliso ogqityiweyo kushishino ukutya ezifana itshokolethi kunye neswekile, zombini ezo hygroscopic.When kakhulu ukufuma liphezulu, imveliso iza ukufunxa ukufuma babe incangathi, ngoko ababambelela ukuba ukupakisha oomatshini kunye ...
Lithium Industry Lithium iibhetri ziphezulu hygroscopic nokufuma iimveliso ezibuthathaka kwaye kakhulu ukufuma lithium lemveliso kuya kubangela iingxaki ezininzi iimveliso lithium, ezifana yokusebenza ukungazinzi, ukuncitshiswa ezikhabhathini, ukuncitshiswa umthamo nokukhutshwa. Le nto importa kangaka ...
yempahla, Ukugcinwa Refrigerated
Refrigerated Ukugcinwa Ingxaki inkulu yokugcina refrigerated yi iqabaka kunye ngumkhenkce, kuba xa umoya efudumeleyo iza adibane kwindawo ebandayo, le nto yonke into. Ukuba dehumidifiers ziyasetyenziswa ukudala imeko-bume owomileyo ukugcina refrigerated, ezi ngxaki ziza kusonjululwa i ...
Military Ukugcinwa Amashumi amawaka dehumidifiers asetyenziswa ukukhusela kuzo zonke iindawo zehlabathi izixhobo zomkhosi eninzi, ukusika iindleko zolondolozo kakhulu kwaye nokwandisa lupwa ukulungela izixhobo zomkhosi ezifana moya, amatanki, iinqanawa kunye nezinye izinto zomkhosi. ukudla eyeleleneyo ...
Chemical Glass iTire
Zemichiza izichumisi Uninzi ziqulathe ityuwa emanzini-enyibilikayo, eziye ukuwuphumeza kakuhle ekukhutshweni izondlo kwezimbiwa ukuba crops.All izinto nesichumiso ngqo ngamanzi kwaye basebenzisane ukufuma kwi-atmosfere ngokuqhelekileyo kukhokelela kwiziphumo ezingafunekiyo ezifana caking o. ..
Xa isityalo samandla senyukliya evala phantsi ngenxa kokufaka-inkqubo ezinokuthatha air dehumidified unyaka-wonke uyakwazi ukugcina amalungu ezingezo-yenyukliya ezifana boilers, condensers, kunye turbines mhlwa mahala. Ingxaki ukufuma yoshishino weplastiki kubangwa isenzeko amafu phezu su ...